Adiresy: Kota BNI, Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Indonezia
Contact phone: +62 21 574 4408
Fotoana misokatra: Mon - 7:00 hatramin'ny 18:00, Tue, Thu, Fri - 7:00 hatramin'ny 19:00, Sat sy Masoandro - Weekends
Taonan'ny fanorenana: 1996
Ny haavon'ny lanitra: 262 m
Ny Wisco 46 dia iray amin'ireo zava-tsarobidin'ny renivohitr'i Indonezia , isan-taona dia manintona mpizahantany an'arivony maro hankalaza ny famolavolan-doha sy mahavariana, loko tsara tarehy sy kisarisary miavaka any Jakarta avy any amin'ny ambaratonga ambony. Ao amin'ny trano dia hahita birao maro, birao banky, cafés, trano fisakafoanana, fivarotana ary maro hafa.
Ny trano fandraisam-bahiny dia ao amin'ny distrikan'ny orinasa indostrialy indonezianina - Central Jakarta, 25 km miala ny seranam-piaramanidina Soekarno-Hatta . Manodidina an'i Wisma 46 no tranombakoka nasionalin'ny tantara sy tsena Jalan Surabaya.
Ny tantaran'ilay hôpitaly
Wisma 46 miorina tsara tarehy dia naorina tamin'ny taona 1996. Ny tetik'asa fanorenana dia nomanin'ny orinasa malaza antsoina hoe Zeidler Partnership Architects. Tamin'izany fotoana izany, io no trano avo indrindra teto Indonezia. Ho fampiharana ilay tetikasa ho an'ny hôpitaly, dia mihoatra ny 132 tapitrisa dolara no lany. Ny tompon'ny hôtôkrôpeana dia PT Swadharma Primautama. Hatreto, Wisma 46 no heverina ho iray amin'ireo trano tsara tarehy sy mahafinaritra indrindra eran-tany, ary mahomby tokoa ny filan'ny mponina sy ny vahiny ao an-drenivohitra.
Ireto ambany ireto ny toetra mampiavaka ny hômpera Wisma 46:
Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 230 metatra.
ny trano fandraisam-bahiny dia 48 isa, anisan'izany ny tany 46 sy 2 ambanin'ny tany;
Manompoa Wisma 46 fiakarana avo lenta (24 eto izy ireo, mampitombo haingana ny haavony hatramin'ny 6 m isan-tsegondra);
ao anatin'ny lisitr'ireo trano avo indrindra eran'izao tontolo izao, i Wisma 46 dia miorina amin'ny toerana faha-184 ary ao anatin'ny lisitr'ireo avo lenta any Indonezia - toerana 2 aorian'ny tilikambo televiziona Jakarta.
Architecture sy interior de Wismas 46
Ao amin'ny trano fanorenana avo be, misy endrika roa - ny modernity sy ny postmodern - dia azo trandrahana. Ny endriky ny trano haingon-trano dia vita amin'ny fotsy fotsy sy manga ary mampiseho tilikambo tsy fantatra miavaka amin'ny endriky ny kibatra, manomboka eo amin'ny fototra izay misy tilikambo fitaratra mitsangantsangana avy ao anatiny. Manoritsoritra ny endriky ny tendron'ny endrika boribory.
Eo afovoan'ny velarantany Wisma 46 dia ny fampiasana ny fitaovana sy ny teknolojia farany indrindra. Ankoatr'izay, ireo tononkalo manga sy fotsy amin'ny toeram-pandehanana dia manondro ny fampifangaroana singa roa - ny rano sy ny rivotra, izay mampahatsiahy ny endrika, eo an-tanany, ny vorona rehefa manidina, ary ny iray kosa, amin'ny onja maranitra.
Inona no hitako ao anaty trano?
Noho izany, ianao dia tao amin'ny tranokely Wisma 46. Ireto misy:
birao sy biraon'ny solontenan'ny orinasa lehibe iraisam-pirenena;
sampana misy banky maro manerantany;
kafe sy trano fisakafoanana ( natokana ho an'ny sakafo indonezianina ny vahiny, ohatra, nasi goreng na sate, ary lovia avy amin'ny sakafo Eoropeana);
Tranombarotra sy fivarotana maro (mividy indoneziana , akanjo, kiraro, fanaka avy amin'ny renirano sy ny perla, sary sokitra hazo, sns.);
Fikambanana Iraisam-pirenena ao Jakarta;
Fiara fitaterana ambanin'ny tany ho an'ny fiara (eo amin'ny 2 ambony ambany amin'ny trano lehibe iray).
Ny varavarankelin'ny trano avo dia misy sary mahafinaritra mahavariana an'i Jakarta, izay hitanao, nitsangantsangana tao anatin'ny segondra vitsivitsy tamin'ny fiakarana an-tampon'ny trano iray. Ankoatra ny velarantany Wisma 46 dia tamba-jotitr'ireo hotely avo lenta. Mahafinaritra ny toerana, ny fidirana amin'ny fitaterana, ny famolavolana mahafinaritra sy ny trano fialamboly mahafinaritra dia tsy ny mpizahatany fotsiny ihany, fa ny tompon'ny orinasa, ny banky, ny mpanafika manofa trano any amin'ny trano lehibe iray.
Mba hahitana an'i Wisma 46 ny takelaky ny tilikambo, mandehana any afovoan'i Jakarta amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto:
Amin'ny bisy fitateram-bahoaka Trans Jakarta. Mila mipetraka ianao alohan'ny fijanonana an'i Dukuh Atas. Avy eo mankany amin'ny lavaka fantsakana 5 minitra mandeha.
Amin'ny lamasinina. Mankanesa any amin'ny Sudirman station, mandeha 10 minitra ary eo no eo.
Amin'ny taxi. Amin'ity tranga ity, aleonao ny taxi official Blue Bird (fiara manga) ary mandehana ny lozam-pifamoivoizana. Ny lalana avy any amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Soekarno-Hatta dia mila 45 minitra.
Ny zaridaina Botanical (Bogor)
Moa ve manana rantsantanana mitovy amin'ny halavany i Kate Middleton?
Bisikileta ho an'ny ankizy
Fitsaboana amin'ny hozatry ny fo - fitsaboana sy fitsaboana
Ny renivola ho an'ny fiterahana ho an'ny fividianana fiara
Vitaminina d3 - inona no ilainy amin'ny vehivavy ary inona no sakafo ananany?
Mijoroa ho voninkazo
Victoria Beckham dia nanamboatra mpitsidika ho an'ny mpivarotra am-baravaran'i London
Maskin'i Banana ho an'ny volo
Akanjo jiro amin'ny kilasy premium
Kiparisovik - fambolena sy fiahiana